ဒန်ပေါက်တွေ ဝယ်ဒယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင် (Nasi Brayani) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Food, Drink & Recipes » ဒန်ပေါက်တွေ ဝယ်ဒယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင် (Nasi Brayani)
ဒန်ပေါက်တွေ ဝယ်ဒယ် – KZ’s ထမင်းဆိုင် (Nasi Brayani)
Posted by ဇီဇီ on Feb 23, 2015 in Food, Drink & Recipes, How To.. | 61 comments
Nasi Brayani – (ဒံပေါက်ထမင်း)
ဒန်ပေါက် (ဒံပေါက်) ဆိုလို့ ဒန်အိုးပေါက်လို့တော့မထင်လိုက်ပါနဲ့။
ခင်ဇော် တစ်နေ့တာ အစားချင်ဆုံး အစားအသောက် စာရင်းထဲမှာ ပါဝင်တဲ့ (ဒံပေါက်) ဒန်ပေါက်ရယ်ပါ။
စာရင်းထဲ ဘာတွေပါတုန်းဆိုတာတော့ ပြောပြဘူးးး၊ ဒီ ဧည့်သည်ကို ကြောက်သွားမှာ ဆိုးလို့။
ပထမဆုံး ဒန်အိုး ဖောက်မဲ့ သူကတော့ စွယ်စုံ ကိုကို ကျောက်(စ) ဖြစ်ပါတယ်။
ကျောက်စ်တို့အရပ်က စိနတိုင်းဆိုတော့ အိန္ဒိယစာ အနှီဒံပေါက်က စိတ်ရှိတိုင်းဝယ်စားဖို့ မလွယ်လှပါဘူး ။
ဆိုင်မရှိဘူးလားဆိုတော့ ရှိတော့ရှိပါရဲ့ အရောင်အဆင်းကလည်း စွဲမက်လောက်ဖွယ်မရှိ ၊ အနံ့အရသာကလည်း ချိုချိုရဲရဲ ပါးစပ်ထဲမှာ အာမထိလျှာမထိမို့ စားချင်ရင် ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး ၊ အိမ်မှာပဲချက်စားရတာပေါ့ ခင်ဗျာ ။ မချက်တတ်ခင်ကတော့ အတော်လက်ဝင်မယ် ထင်ထားခဲ့ပေမည့် တကယ်တမ်းတော့ ထမင်းနဲ့ဟင်း သက်သက်စီချက်တာထက်စာရင် အချိန်ကုန်သက်သာ လူလည်းသက်သာပါတယ် ။
ကိုင်း… ကျောက်စ်ရဲ့ မြန်ဆန်လွယ်ကူ ကြက်သားဒံပေါက်အစိမ်းဖောက်ကလေးကတော့ ဒီလိုပါခင်ဗျာ ။
ကြက် အရွယ်တော် ၆၀သားလောက် တစ်ကောင်ကို ခေါင်းတွေ ခြေထောက်တွေဖြတ်ပြီး လေးပိုင်းပိုင်း ၊
ဆား အချိုဇွန်း ဇွန်းတဝက် ၊
နနွင်း အချိုဇွန်း ဇွန်းတဝက် ၊
ပဲငံပြာရည် အကြည် စားပွဲတင် ၂ဇွန်း ၊
ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင် ၁ဇွန်းနဲ့ နယ်ပြီး ရေခဲသေတ္တာအောက်ဆင့်မှာ တစ်ညလောက် နှပ်ထားလိုက်ပါတယ် ။
နောက်နေ့ရောက်မှ ကြက်သွန်ဥနီ တစ်လုံးကို ပါးပါးလှီး ၊
ဟင်းချက်ထောပတ် (Gee) စားပွဲတင် ၃ဇွန်းနဲ့
ရိုးရိုးဆီ စားပွဲတင် ၃ဇွန်းရောထားတဲ့အထဲမှာ ရွှေညိုရောင်ပေါက်လာအောင် ရွရွလေးကြော်ပြီး ဆယ်ထားလိုက်ပါတယ် ။
ဒံပေါက်ဆန် (Basmati Rice) နို့ဆီဗူး ၂လုံး (500g ခန့်) ကိုရေစင်အောင်ဆေးပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးထဲမှာ ရေပုံမှန် ၊ ဆား အချိုဇွန်း ၂ဇွန်းနဲ့ မိနှစ် ၂၀လောက် စိမ်ထားပါတယ် ။
ပြီးမှ အဲသည့်ဆီထဲကို သစ်ကြပိုးခေါက် လက်တဆစ်လောက်ထည့်ပြီးဆီသတ် ၊
မွှေးလာရင် နှပ်ထားတဲ့ ကြက်သားတုံးတွေကို တစ်ခုချင်းထည့်ပြီး မီးအနေတော်နဲ့ အရောင်ရဲပြီး အရေခွံတင်းလာရုံတင် ကြော်လိုက်ပါတယ် ။
ကြက်သားတုံးတွေ အရောင်လှသွားရင် ပြန်ဆယ်ပြီး ဆီကို သင့်တော်ရုံလောက် ပြန်လျှော့ပါ ။
ကြေညက်အောင်ထောင်းထားတဲ့ ဂျင်း စားပွဲတင် ၂ဇွန်း ၊
ကြက်သွန်ဖြူ စားပွဲတင် ၂ဇွန်း ၊
ဒိန်ချဉ် စားပွဲတင် ၅ဇွန်း ၊
နို့စိမ်း စားပွဲတင် ၂ဇွန်း တို့ကို သမအောင်မွှေ၍ ကြက်သား ၊ ဆီလက်ကျန်နဲ့ ရောပြီး မီးမျှင်းမျှင်းမှာ ၁၀-၁၅ မိနစ်လောက် လုံးချက်လေးချက်လိုက်ပါ ။
အိုးမကပ်အောင် သာသာလေး မွှေပေးပါ ။
ရေစိမ်ထားတဲ့ဆန်တွေကို ပေါင်းအိုးထဲမှာပဲ ၄ပုံ ၃ပုံလောက်ချက်ပါ ( ပေါင်းအိုးထဲကထမင်း ရေခမ်းစပြုချိန် ) ။
ထမင်းအနေတော်ပြီဆိုရင် ခလုပ်ပိတ်၍ ထမင်း အပေါ် ၄ပုံ ၃ပုံလောက်ကို ဖယ်ထုတ်လိုက်ပါ ။
လက်ကျန်ထမင်းအပေါ် ချက်ထားသော ကြက်သားနဲ့ ဟင်းအနှစ်များကို ဖြန့်ထည့်လိုက်ပါ ။
အပေါ်က ကြော်ထားတဲ့ကြက်သွန်တွေ ဖြူးလိုက်ပါ ။
ဖယ်ထုတ်ထားတဲ့ ထမင်းကို မုံလာဥနီ အတုံး ၊ ပဲစိမ်းစေ့ ၊ သီဟိုဠ်စေ့ ၊ စဗျစ်သီးခြောက်များနဲ့ အလွှာလိုက် ဖြန့်ထည့်ပါ ။
ကြိုက်တတ်ရင် ကရဝေးရွက်လည်း ထည့်ပါ ။
ပြီးမှ စဉ်းငယ်ခန့် Zarda အရောင်မှုန့်ကလေး ထမင်းပေါ် ကျဲကျဲလေးဖြူးပြီး ၁၅မိနစ်လောက် ပေါင်းအိုးခလုပ်ပြန်နှိပ်၍ နှပ်ထားလိုက်ပါလျှင် အထူးစပါယ်ရှယ် အရောင်စုံ အရသာထူး ကျောက်စ်ဒံပေါက်ကို ရပါပြီ ။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ ယောက်ခမ ဆာ ခေါ် ကို ဆာမိ ဖြစ်ပါတယ် ခင်ညားးး
နာမည်နဲ့ အစားအသောက် လိုက်တယ်နော်။ ဟိ
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ တညား ချစ်ချစ် အီးဇီးကွတ် မမဝေ ခေါ် ဝေဝေ ဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မှာဆိုရင် ဒန်ပေါက်ကို အလွယ်တကူဆိုင်မှာဝယ်စားလို့ရနိုင်ပေမယ့် နယ်မြို့မှာနေသူများနဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာနေသူများအနေနဲ့ ဒန်ပေါက်ကောင်းကောင်းစားချင်ရင် ကိုယ်တိုင်ချက်စားမှသာ အဆင်ပြေပါတယ်။ ထမင်းပေါင်းအိုးနဲ့တင် အလွယ်ချက်စားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုကို စမ်းသပ်ချက်စားကြည့်ပြီး မိသားစု ၄ ယောက်စာ အလွယ်တကူချက်စားနည်းလေး မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။
ကြက်သားနဲ့ထမင်းကို ခွဲပြီးချက်ထားပါတယ် …
ဆန် …. နို့ဆီဗူး ၂ ဗူး
ထောပတ် …. စတီးဇွန်း ၃ ဇွန်း
သစ်ကျားပိုး၊ ကရဝေးရွက်၊ လေးညှင်း၊ စမုံစပါး၊ ဖာလာစေ့၊ နာနတ်ပွင့် … အနည်းငယ်စီ
ကြက်သွန်နီကြော် …. အနေတော် ၃ လုံးစာခန့်
ဆား၊ သကြား …. သင့်တော်သလိုထည့်ရန်
အရောင်မှုန့် … အရည်ဖျော်ပြီးသား နဲနဲ
ပဲစိမ်းစေ့၊ သီဟိုစေ့၊ စပျစ်သီးခြောက်များကို နှစ်သက်ပါက ထည့်လို့ရပါသည်။
ဆန်ကိုရေဆေးပြီး ယခင်ထမင်းချက်နေကျအတိုင်း ဆန်နှင့်ရေအချိုးအတိုင်း ထမင်းပေါင်းအိုးထဲတွင် ထည့်ပြီးချက်ပါမယ်။
ရေစဆူသည့်အချိန် တစ်ဖက်မီးဖိုပေါ်တွင် ထောပတ်ဆီပူအောင်တည်ပြီး သစ်ကြားပိုး၊ ကရဝေးရွက်ထည့်ပြီး ၂ စကန့်လောက်ဆီသတ်ပါမယ်။
ပြီးရင် လေးညှင်း၊ စမုံစပါး၊ ဖာလာစေ့၊ နာနတ်ပွင့်တို့ကို ဆီပူထဲထည့်ပြီး ချက်ခြင်းမီးပိတ်လိုက်ပါမယ်။
ဆီသတ်ပြီးသားအားလုံးကို ထမင်းအိုးထဲထည့်၊ ဆား၊ သကြားထည့်ပြီး ယောင်းမနှင့်မွှေပြီး ခဏနှပ်ပါမယ်။
အားလုံးကျက်ခါနီးအချိန်မှာ ဆိုးဆေးနဲနဲ၊ ကြက်သွန်နီကြော်ထည့်မွှေပြီး အိုးပိတ်ကာ ပြန်နှပ်ထားပြီး ထမင်းအိုးခလုပ်တက်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်နေရင် အနံ့အရသာပြည့်စုံတဲ့ ဒါန်ပေါက်ထမင်းရပါပြီ။
ပူစီနံရွက်ဝယ်လို့အဆင်ပြေပါက ထမင်းနပ်ခါနီးမှာ ပူစီနံရွက်နဲနဲထည့်ပြီး နှပ်စားပါက အနံ့ပိုကောင်းပါတယ်။
သရက်သီးသနပ်၊ ဘလချောင်ကြောင်၊ သခွားသီးအချဉ်နှင့် ချဉ်ပေါင်ဟင်းရည်တို့နှင့် အလွန်လိုက်ဖက်ညီသည့် ဒန်ပေါက်ထမင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကြက်သားဟင်းကို ဝေ့ ချက်နည်းထဲကပဲ ယူလိုက်ပြီ။
ကျနော် ကိုယ်တိုင် စားခဲ့ဖူးတဲ့ ဟင်းမို့ ဒီ ချက်နည်း အလွန်စားကောင်းပါကြောင်း ရဲရဲကြီး အာမခံလိုက်သည်။
ကြက် အကောင်ခပ်သေးသေး (၁) ကောင် .. ၃၅ ကျပ်သားခန့်
ကြက်သွန် အနီ (၂) ဥ … ကြက်သွန်ဖြူ နဲ့ ဂျင်း သင့်တော်သလိုထည့် ..
သစ်ကြားပိုး .. ကုလားဝေး … ကုလားမဆလာ
ဆား .. ဆနွင်း .. ငံပြာရည် .. ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့်
ကြက်တစ်ကောင်ကို (၄) တုံးတုံးပြီး ဆား ဆနွင်းနဲ့ ငံပြာရည်နယ်ပြီး တစ်နာရီခန့်ထားပါသည် ..
ဒိန်ချဉ်ရှိပါက အနည်းငယ်ထည့်ပြီး နယ်ထားလျှင် ပိုကောင်းပါသည်။
ဒါန်အိုးထဲကို ဆီ (မခန့်မှန်းတတ်ပါ) သင့်တော်သလိုထည့်ပြီး ဆီဆူလာလျှင် ကြက်သွန် ဖြူနီဂျင်း ထောင်းထားတာကိုထည့်ပြီး ဆီသတ်ရပါမည် …
ကြက်သွန်များ နွမ်းပြီး မွှေးလာသည်အထိ စိတ်ရှည်ရှည်ဆီသတ်ရပါမည် ..
ထို့နောက် သစ်ကြားပိုးနဲ့ ကုလားဝေးရွက်ကိုထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါသည် …
အဲဒီနောက် ငရုတ်သီးအစိမ်းမှုန့် (အရောင်တင်မှုန့်) ထည့်ပြီး ခေတ္တမွှေပေးပါသည်။
ထို့နောက် အသင့်နယ်ဖတ်ထားတော့ ကြက်သားကိုထည့်ပြီး မွှေးလာသည်အထိထားပါသည်။
မဆလာ အနည်းငယ်ကိုပါ ထည့်ပြီး မွှေပေးပါတယ် …
ရေထွက်တာကုန်ပြီဆိုလျှင် နောက်ထပ် သင့်တော်သလောက်ရေထည့်ပြီး အဖုံးအုပ်ကာ ကြက်သားများနူးသည်အထိ တည်ထားရုံပါပဲ … ကျက်ခါနီး ဆီပြန်ခါနီးမှာ မဆလာမှုန့်အနည်းငယ်ထပ်ထည့်လိုက်ပါသည် …
အလွန်မွှေးကြိုင်ပါသဖြင့် တခြားအခန်းမှ သူများ အနံ့ရပြီး ဗိုက်ဆာကုန်ပါသည် …
နောက် တစ်ယောက်ကတော့ ယောက်ခမွ သဲ ခေါ် မွသဲ ပါ။
နောက်တစ်ယောက်ကတော့ တညား အချစ်တော် ဝါး/ဝူး/ဝိုး/ဝေါင်း ရဲ့ အင်မတန် အီးဇီးကွတ်လက်ရာ။
ကြက်တစ်ကောင်ကို ပေါင်နှစ်တုံး ရင်ပုံနှစ်တုံး ၄ခြမ်းခြမ်း (၄၅ ကျပ်သားလောက် အကောင်ဆိုအတော်ပဲ)
ပီးရင် ဒိန် ဂျင်း ကြက်ဖြု၊ ကြက်သွန်နီကြော်ပီး အအေးခံ၊ ဆား၊ ရသာမှုန့် ဒန်ပေါက်မဆလာနဲ့နယ် နာရီဝက်လောက်နှပ်ထား၊
ဆိုင်တွေမာ ဒန်ပေါက်အရောင် အ၀ါ ၀ယ်၊ လှချင်ရင် အနီပါဝယ်၊
စပျစ်သီးခြောက် သီဟိုစေ့ ကြိုက်ရင်ထဲ့၊
ဒန်ပေါက်ဆံက ဆံကြောမာမှကောင်းတော့ ပေါ်ဆန်းဆိုသိပ်မကောင်းဘူး တောင်ပျံမ၊
ထမင်းအိုး ဆန် တစ်လုံးခွဲကို ဆူအောင်တည် ဆန်ကြောဆန့်ပီး နှပ်ရတဲ့အနေဆို ဆယ်ပီးစကာနဲ့စစ်ထား၊
ခုန နယ်ထားတဲ့ကြက်သားကို ပေါင်းအိုးအလွတ်ထဲစီထဲ့ အနှစ်တွေထဲ့ ဆီထဲ့၊
ပီးရင် ခုန ထမင်းရည်စစ်ထားတဲ့ ထမင်းကို တစ်ထပ်ထဲ့လိုက်
အ၀ါရောင်ကို ဆားနဲနဲ သကြားနဲနဲ ရေဖြော်ထားတာ နဲနဲစီပက်
အပေါ်ဆုံးအလွာ အနီရောင် အမှုံ့ နဲနဲဖြန့်ထည့်
စပျစ်သီး၆နဲ့ သီဟိုစေ့ အပေါ်ဆုံးမာထဲ့ ပီးရင် ထမင်းပေါင်းအိုး ခလုပ်နှိပ်ပီးပေါင်းလို့ရဘီ
ခု နောက်ဆုံး နည်း က ဗေတားနည်းး၊ တောင်းတော့ ဒီ အတိုင်းပဲ ပေးတယ်။
• သစ်ကြမ်းပိုး, ကရဝေး, ဖာလာ, နာနတ်ပွင့်, စမုံးစပါး, ငြုပ်ကောင်း, လေးညှင်း, (စပိတ်တစ်, ဒိုင်းမွန်းဆဲဗင်း အဲယောင်လို့ အာ့ပါဘူး) တို့ရောပြီးး ပိတ်စနဲ့ထုပ် ထိပ်ကစည်း
• ထမင်းအိုးထဲကို ထည့် ချက်
• ဆားနဲနဲထည့် နော်
• ပြီးရင် ကြက်သား ကဒိန်ချဉ် ဆား ဆနွင်း ဒန်ပေါက်မဆလာ နယ်ထားတာကို ထုံးစံအတိုင်းချက်
• ကြက်နူးရင် ကြက်သွန်နီကြော်ထားတာကို သပ်သပ်ဖယ်ထားတာကိုရော
• သကြားနဲနဲထည့် အနှစ်များများရအောင်
• ပြီးမှဒန်ပေါက်မဆလာ ထပ်အုပ်ပြီး ချ
• ခုနက ထမင်း မကျက်ခင်ရေဆူရင် သီဟိုလ် စေ့နဲ့ စပျစ်သီးခြောက် ရော
• ထမင်းနပ် ရင် ပဲသီးစိမ်းနူးအောင်ပြုတ်ထားတာကို ရေ ကာလာ အဝါ အနီ ထည့် မွေလိုက်ရင် ဒန်ပေါက်ဖြစ်ပါပြီ
• ပြီး မှ ခုနက ကြက်ချက်ထားတဲ့ အနှစ် ကို ရောနယ် သို့မဟုတ် သပ်သပ်စီစား ပေါ့
• တစ်ချိုးကတော့ သပ်သပ်သီချက်ပြီး ထမင်း သိပ်မနပ်ခင်မှာ ချ လို့
• ကြက်သားကို အောက်ဖက်ကထား ထမင်း အပေါ်တင် ကာလာဖြန်း
• ကြက်သွန် ကြော်ဖြူးပြီး ပြန်နှပ်ထား
• စားခါနီးမှအောက်နဲ့အပေါ်မျှအောင်းခူးခပ် ပေးကြတယ်
• အဲအဲ အချဉ် မေ့တော့မလို့
• သခွားသီး ကြက်သွန်နီ ပူစီနံ ငြုပ်သီးစိမ်းပါးပါး လှီး ထားတာကို ဒိန်ချဉ်နဲ့ရော ဆားထည့်
• ရိုက်သာ လို့ကုလားလိုခေါ်တယ်
ချက်တတ်တဲ့သူများ ကျန်နေရင် ကော်မန့်မှာ ပြောသွားပေးကြပါနော်။
(ဖွဘုတ်က မွဘုတ်ရဲ့ နည်း ၂ မျိုး)
1) ဖြစ်သလို ဇာတ်ပျက် ဒန်ပေါက်
မွန်ဂိုတံဆိပ် Basmati ဆန်ကို နာရီဝက်ရေစိမ်
ရေ ၂ ခွက်နည်းနည့်လျှော့
နို့စိမ်း ၁/ ၄ ခွက်
ှကြက်သွန်ကြော် ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဇွန်း
ဆား သကြား သင့်ရုံ
ကရဝေး ဖာလာ လေးညှင်း သစ်ကြမ်းပိုး အနည်းငယ်ဖြင့် ထည့်ချက်ပါ
ကြက်သွန်ကြော် ချေထားတာကို ထမင်းနပ်ခါနီးရေခန်းမှ အပေါ်ကဖြူး ပြီးပါက
မီးခလုပ် ကို နှပ်ပြီးနောက်တစ်ခါလောက်ထပ်နှိပ်ပါ
ဆနွင်းမထည့်ရ ကြက်သွန်ကြော်ဆီကို ကြက်သားနှပ်ရန်နှင့် ထမင်းထဲသို့ လိုအပ်လျှင် ထည့်ရန် သုံးပါမည်
ဒန်ပေါက်အတွက် အရောင်မှာ မူရင်း ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ရင်မပူစေရန် ကုံကမံ saffron ကို နွားနုိ့နှင့်စိမ်ပြီ ထည့် ပါသည်
ခုနောက်ပိုင်းတော့ ကိတ် သို့ အအေးဖျော်ရန် အရောင်များအစားထိုးသုံးကြသည်
ဒိန်ချဉ် ဆား နနွင်း ချင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူ အရည် တို့ဖြင့် နယ်ပါ
နှစ်နာရီခန် ထားပြီးကြက်သွန်ကြော်ထားသောဆီ ကို ထောပတ်အနည်းငယ်ရောပြီး ကရဝေး ဖာလာ လေးညှင်း သစ်ကြမ်းပိုး အနည်းငယ်စီဖြင့် ဆီသတ်ထဲသို့ ကြက်သားတစ်ထပ် ကြက်သွန်ကြော် ချေထားတာ တစ်ထပ် ပေါ်သို့ ကြက်နှပ်ထားသော အရည်များပါလောင်းထည့် မီးအေးအေးဖြင့်နှပ်ထားပါ
ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ အစေ့ အဆန်တွေ ပိုထည့်လို့ရတာတော့ သဘောပေါက်
2) ဒန်ပေါက် အစစ် အရိုးခံချက်နည်း
ပညာသားက ခုမှစတာ ။အရိုးခံဆိုတာ အရိုးခံချက်လို့ပါ ရှင်းပါတယ်
ကြက်အလည်ရိုး နှင့် အသည်းအမြစ်များကိုလည်း ထုံးစံအတိုင်းရောနယ်ထား တဲ့အပေါ်ကနေ M n M လို ကြက်ကလေးတွေကိုတန်းစီပါ
ဆားနဲ့ ကရဝေး သစ်ကြမ်းပိုး ဖာ လာ လေးညှင်း ရေဆူ ဆူထဲ့ နာရီဝက်လောက်ရေစိမ်ထားတဲ့ ဆန် အနေတော်လောက်မှာ ဆယ်ပြီးရေစစ်ထားတာတွေ
အသားပေါ်ကနေ ဆန်တစ်ထပ် ကြက်သွန်ကြော် တစ်ထပ် ထည့်လာလိုက်တာ ကန်ထရိုက်တိုက်လို အပေါ်ဆုံးထပ်ရောက်ရင်
အစေ့အဆန်တွေ ပေါ်ကနေ ထောပတ်ဆီ ကြက်သွန်ကြော်ဆီ ကုံကမံ သို့ food colour ထည့်ပြီး မီးပေါ်မတင်မီ အငွေ့လုံအောင့် သတင်းစာရေဆွတ် အိုးအနားတွေ ပိတ်ပါ
အရေးအကြီးဆုံး မဆလာ ကတော့ ရိုးသားစွာ အချိန်အဆ ရေးထားတာလည်းပါမလာ မှတ်လည်း မမှတ်မိတော့ပါ
ထုံးစံအတိုင်း ရမ်းသမ်းပြီး လုပ်ပါမယ်
ဇိယာ နဲ့ နံနံ ဆတူ ထဲကို ကရဝေး ဖာလာ လေးညှင်း သစ်ကြမ်းပိုး နည်းနည်းစီ သင့်ယုံ
သဲစင်အောင် ရေဆေး သန့်စင် အခြောက်ခံ လှော်ပါ
ဟားးးးး အစုံပဲ….။ ဟိုဒံပေါက်ဆိုင်က အတော်ညစ်ပတ်တယ် ကြားပြီးနောက်ပိုင်း ဒံပေါက်ဝယ်မစားဖြစ်တာတောင် ကြာပြီ….။ ဟိုတစ်ခေါက် မဝေါင်းလာစားတဲ့ဆိုင်က ဒံပေါက်လဲ ပါးစပ်ထဲမကြိုက်ဘူး ဖြစ်နေတာနဲ့ မစားဖြစ်….။
လာမယ့်အပတ် ပိတ်ရက်တော့ ခရီးမထွက်ဖြစ်တာနဲ့ အလုပ်ရသွားပြီ….။
ခရီးမထွက်ဖြစ်မယ့်အတူတူတော့ ဒါလေးတွေ ကော်ပီသွားပါတယ်….(ပိန်ဦးတော့မယ်….)။
ဒါနဲ့ ထမင်းကာလာအတွက်ကို ဘာသုံးလဲဟင်…မချွိ
ကင်းကောင်လေး စာမဲဆို ကြက်အစား ကြောင်ကိုထည့်ချက်လိုက်ပါရား…။ ကင်းကောင်စားတာ ဒါချဉ်ရို့စ်
ထမင်း ကာလာ အတွက် သူတို့ ပြောသွားတယ်။
ရန်ကုန်မှာတော့ မမဝါးကို မေးကြည့်။
ဘယ်မှာ ဝယ်လို့ရလဲ ဆိုတာ။
ထမင်းကာလာက ဒီမာတော့ ပရဆေးဆိုင်တွေမှာ အစားအသောက်ဆိုးဆေး ဒန်ပေါက်ကာလာလို့ ပြောရင်သိတယ် ကင်းကောင်လေး အ၀ါရောင်နဲ့ အနီရောင်ကြိုက်ရင်ထဲ့ :sar:
ဟုတ် မ၀ါး ကျေးကျေးပါ….။ ဒါဆို ဖာလာတို့ စမုံစပါးတို့ဝယ်ရင်း ၀ယ်လို့ရတာပေါ့နော်……။ အ၀ါရောင်နဲ့ အနီရောင် ရိုက်တယ်….။ အများကြီးတော့ မထည့်ရဲဘူး….
ဟုတ်တယ် အရောင်များသွားရင်မကောင်းဘူး၊ နဲနဲဆီပက်တော့ အဖြူတစ်ချို့အ၀ါတစ်ချို့နဲ့ ပိုလှတယ်
City Mart မှာ Food Colour အဆီပုလင်းလေးတွေ Bakery တန်းမှာဝယ်လို့ရတယ်
ကွတ်တွေအထဲမှာ တီတီသဲကိုဗဲ ခြစ်တယ်..။ သူစီမံယာ နှာဂံမယ်..
ခုတော့ မန်းလေး မှာ ဆို ကေမီမွန် ကျွေးမဲ့ အလှူရှာ လိုက်စားလိုက်။
ခုက homemade အတွက် စားဖိုမှူး ရှာတာ
ဒန်​​ပေါက်​ဆိုင်​ ဖွင့်​မယ်​လို့ ကြိုသတင်းရလို့ တန်းစီထားတာ​တောင်​မှ ကိုယ့်​ထက်​ဦးသူ​တွေ ရှိ​နေ​သေးတယ်​။
အရင်ဆုံး သိတဲ့လူက နောက်ကျနေပြီ။
ချက်တတ်တဲ့သူများ ကျန်နေရင် ကော်မန့်မှာ ပြောသွားပေးကြပါနော်…. လို့ ရေးထားတာကို
စားတတ်တဲ့သူများ ရှိရင် ကော်မန်မှာ ပြောပေးသွားပါ ….. လို့ သိသိကြီးနဲ့ မှားဖတ်ပြီးးးး
စားတတ်သူများ တန်းစီတဲ့ထဲမှာ သများရှေ့ဆုံးကပါ။
ဒန်ပေါက်ကြိုက်သူများအတွက် မြန်မာဒန်ပေါက်ဆိုင်လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များ- zaw win
၁။ Hello ဒန်ပေါက်၊ အမှတ်-၈၊ ဦးဖိုးထူးလမ်း၊ သာဓုအနောက်ရပ်ကွက်၊ ကြည့်မြင်တိုင်။ ဖုန်း – 0943176040 , 0973107993, 095093740
၂။ ချန်ပီယံဒန်ပေါက်၊ အမှတ်-၁၅၊ ၃လမ်း၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ (၄)ရပ်ကွက်၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ (ဘုရင့်နောင်တာဝါအနောက်၊ လှည်းတန်းကုန်းဆင်း) ဖုန်း – 727168, 527889
၃။ ကောင်းသန့်ဒန်ပေါက်၊ အမှတ် (၂/ဘီ)၊ ပါရမီလမ်းမကြီး၊ ချော်တွင်းကုန်းမီးပွိုင့်နှင့်မဉ္ဖူလမ်းကြား၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်။ ဖုန်း-703415, 098627378
၄။ ဦးဆန်းမင်း ဒန်ပေါက်၊ အမှတ် (၈၈၇)၊ အေးသိဒ္ဒိလမ်းသွယ်(၁)၊ ရွာမအရှေ့ရပ်ကွက်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်။ ဖုန်း – 09 73077323
၅။ ရသာမွန်ဒန်ပေါက်၊ အမှတ်(၂၈)၊ အောင်ချမ်းသာလမ်း၊ (၅)ရပ်ကွက်၊ ဆင်မလိုက်၊ ဟံသာရိပ်မွန်အိမ်ယာ၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ဖုန်း -535460
၆။ စိတ်တိုင်းကျဒန်ပေါက်၊ မပိုလမ်း၊ မြေနီကုန်း။ ဖုန်း-535564,09 9927394
၇။ ဦးပြာလောင်ဒန်ပေါက်၊ က/၀၁၊ ကန်ဦးကျောင်းလမ်း၊ ဖော့ကန်ရပ်ကွက်။ ဖုန်း-645927
၈။ မွန်ထမင်းဆိုင် (ဦးဘရှင်+ဒေါ်မြင့်မြင့်စိန် ဒန်ပေါက်)၊ မီးရထားလိုင်းအတွင်း၊ အင်းစိန်မီးရထားစက်ခေါင်းစက်ရုံလမ်း၊ ဆိုင်အနီးဖုန်း (နေ့) 643955
အမှတ်-၇၈၆/၁၄၊ အိမ်စု(၃)လမ်း၊ ပိန္နဲကုန်း၊ အင်းစိန်။ အိမ်အနီးဖုန်း-(ည)642900
၉။ ကောင်းစံကျော်ဒန်ပေါက်၊ ၁၁၄၊ ပထမထပ်၊ ၁၉လမ်း(အပေါ်ဘလောက်)၊ ၂ရပ်ကွက်၊ လသာမြို့နယ်။
၁၀။ ၀ိသာခါရသာဒန်ပေါက်၊ အမှတ်-၁၈၂၊ ကျိုက္ကဆံလမ်း၊ ကျောက်မြောင်းဈေး၊ တာမွေ။ ဖုန်း-0943029957,0943032099
ဒါ ရန်ကုန်က မြန်မာ ဒန်ပေါက် လိပ်စာတွေတဲ့။ ဟိ။
ဒါက မနိုဗီရဲ့ ပို့(စ) ထဲက http://myanmargazette.net/209732
အန္တရာယ်ကင်းအောင် စားသောက်နည်းများ- Novy
အမှန် ၆ ပါရမီလမ်းမကြီး။ ပါရမီစိန်ဂေဟာအနီး
စဉ်းစားကြစေလိုပါတယ် ( ၃၉ ) ( ဒန်ပေါက် )- Foreign Resident
ဒါက ဘဖောရဲ့ ပို့(စ) ထဲက ဒံပေါက်ဆိုင်တွေ။
ဒီ ပို့(စ) ကို ပြန်ရေးတဲ့ အနေနဲ့ ဆာဆာက ဒံပေါက်ချက်ပြတာ။
အကြိုက်ဆုံး အစားအစာထဲမှာ ဒံပေါက်ပါတယ်…။
ဒံပေါက်ကို ဆိုင်စုံအောင် စားဖူးတယ်…။
မင်္ဂလာ ဈေးနားက ကြက်လျှာစွန်း (မူရင်း) ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ…။
KSS…၊ နီလာ…၊ မြေနီကုန်း တင်အေး…၊
တို့ကတော့ မဆိုးတဲ့ အထဲပါတယ်ပေါ့…။
ကောင်းကြိုက် ဒံပေါက်ကိုတော့ တစ်ခါစားဖူးတယ်…။
ဘလက်ချောကြီး အကြိုက်ထဲ မပါဘူး…။
မြန်မာဒံပေါက်ကို မကြိုက်ရကောင်းလားလို့ ဆဲလည်း ခံရတော့မှာပဲ…။
အခုနောက်ပိုင်း အိမ်မှာအလှူလုပ်ရင် ဆင်မလိုက်က
ချန်ပီယံ ဒံပေါက် ကို အော်ဒါမှာလေ့ရှိတယ်…။
စားလို့တော့ကောင်းပြီး ဈေးနည်းနည်း ကြီးတယ်…။
တစ်ပွဲ ၂၄၀၀ ဆိုလား…၊ အခု…ဈေးတက်သွားပြီလားတော့ မဆိုနိုင်ပါဘူး…။
ဘလက်ချောကြီးမှာ သောက်မြင်ကတ်စရာ အကျင့်ဆိုးတွေများစွာရှိနေတာကို
ဘလက်ချောကြီးဟာ ဟင်းစား အလွန်ကြီးပါတယ်…။
ကြိုက်လို့ကတော့ ဟင်းကုန်တဲ့အထိ ထမင်းထည့်မဆုံးတော့ပါဘူး…။
မကြိုက်တဲ့ ဟင်းဆိုလို့ကတော့ နည်းနည်းပဲစားပြီး လက်စသတ်ပစ်လိုက်တတ်ပါတယ်….။
ဘလက်ချောကြီးက လှည်းတန်း ဦးထွန်းလင်းခြံလမ်းမှာ နှစ်အတော်ကြာ
အဲဒီလမ်းထဲက သူငယ်ချင်းတွေဟာ အလှူဟေ့ဆိုရင် ဒံပေါက်တစ်ပွဲကို
ကြက်သား ၂ တုံး စားရမှ အာသာပြေတတ်တဲ့ ကောင်တွေပါ…။
ကျွန်တော်လည်း သူတို့နဲ့ ပေါင်းနေတဲ့ အချိန်ဆိုတော့
ဒံပေါက်တစ်ပွဲ ကြက်သား ၂ တုံး စားတတ်တဲ့ အကျင့်ကြီးက
ကြက်လျှာစွန်း ဆိုင်ထဲ ၀င်သွားပြီဆိုရင် ဒံပေါက်တစ်ပွဲဟေ့ လို့
ပြောပြီး ကြက်သားတစ်တုံး လိုက်မယ် ဆိုတာ အော်တိုတွဲပြောမိရက်သား
နောက်နောင်များ ရွာထဲက မိတ်ဆွေများ
ဘလက်ချောကြီးကို အလှူဖိတ်လို့ ဒံပေါက်ကျွေးမယ်ဆိုရင်
ကြက်သား ၂ တုံး စီစဉ်ပေးနိုင်အောင်လို့
နောက်…ကျွန်တော် ဒံပေါက်ပို့စ်တိုင်းမှာ ပြောဖူးပါတယ်…။
၀က်သားဒံပေါက် လေးများ စားလိုက်ရရင်ဆိုတဲ့ စကား…။
သုံးထပ်သားအိအိလေးနဲ့ ဒံပေါက် ၁ ပွဲလောက် အားရပါးရစားပြီး
Lucky Strike စီးကရက်လေး တစ်လိပ်လောက်ခဲလိုက်ရရင်ဖြင့်
ပို့စ်ထဲမှာပါတဲ့ ဒံပေါက် ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့
သနားသဖြင့် စီစဉ်ကျွေးမွေး ကြပါရန်
ရိုကျိုးနှိမ်ချစွာ တောင်းပန်အပ်ပါသည် ခင်ဗျား…။
ဝက်သားဒံပေါက် ရှိတယ် ကိုဘက်။
မနေ့က ဝီကီတော့ တွေ့လိုက်တယ်။
ဟင်းစားက ကျနော်လည်း ကြီးတယ်။
အဖိုးဆီက ဟင်း ဒီ အတိုင်းစားတဲ့ အကျင့် ပါလာ။
နောက်ခါ သများလာရင် ဒံပေါက် အစိမ်းဖောက်လေးမြန်း ကျွေးဂျဘာ။
မြန်မာ ဒံပေါက်ဆိုင်က ကောင်းသန့်ခင်ဗျ…။
ကြိုက်တဲ့အစားအစာထဲ ဒန်ပေါက်လည်းပါတယ်။ ရယ်ဒီမိတ်ဒန်ပေါက်လေးကို ချက်စားတာလည်းအတော်ကောင်းတယ် ဒါတောင် ချက်တတ်မှ။ ခု ပြထားတဲံ ဒါန်ပေါက်ချက်နည်းတွေ ချက်စားကြည့်ဦးမှပဲ။ စင်ကာပူမှာစားခဲ့တဲ့ ဒန်ပေါက်တော့ တစ်စက်မှ မကောင်းဘူး။
အမ ရယ်ဒီမိတ် ဒံပေါက်ကို မစားဖူးသေးဘူးးး
စလုံးက ဒံပေါက်က မူစတာဖာ နားက ပါကစ်စတာနီ ဒံပေါက်ပဲ ပါးစပ်တွေ့တယ်။
နွားနိူ့ မလိူင် အနံ့ကို မခံနိူင် ( အဲဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရည်းစားတောင် အကွဲခံခဲ့တာ )
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖတ် မှတ်သွားပါကြောင်း
အာ့ကြောင့် ပိန်တာ ဥမျိုးးး
အရောင် အသွေး မပါကြေးပြောရရင်ဖြင့်
ဒန်ပေါက်ဆို ကြက်လျှာစွန်း ပြီးရင် နီလာ
ခက်တာက ရန်ကုန် ဒံပေါက် မစားဖူးဘူးးး
ဒီလသတင်းစာမှာ သူကြီး ပြောထားသလို
ဒံပေါက်ဆို အသေရရ အရှင်ရရ
.ဖွေးဖွေးနဲ့ ထပ်တူထပ်မျှ ကြိုက်နေမိတယ်ကွယ်
မမဂျီးက ရှလွတ်ခမ်လေးနဲ့ ရရင် ရ
မဟုတ်ရင် အမာခမ်လေးနဲ့ ဖူးစာဖက်ရင်ဖက်မှ ရတော့မယ်။
ဟာ၊၊ မရဘူး။ မွနို က အသက်ငယ်သေးတယ်။
အဟိ ဒီ ပို့စ်ကို မန့်ဖို့ အာရပ်ဒန်ပေါက်ရေးလိုက်တာ တစ်ပုဒ်စာလောက်ချိတွားလို့…
ပို့စ်အသစ်တင်လိုက်ပါဘီ … တွဲဖက် ဖတ်ရှူကြစေလို…
အာရပ် တွေ အတော် အစားကြူးတာပဲ။
ဆိတ်သားဒံပေါက်..အမဲသားဒံပေါက်ရော..ကြိုက်ကြဝူးလား.. ဝက်သားဒံပေါက်လည်းကောင်းမှာပဲ.. :loll:
ခုလေးတင် ဟိုဘက် ကျောက် ရဲ့ ပို့(စ) မှာပြောလာတာ။
ဒါကတော့ ခြေလေးချောင်းသားရှောင်သူတွေ အတွက် ချက်ပေးကြတာမို့။
ကိုယ်ကတော့ စားပဲစားချင်တာ မချက်ချင်ဘူး
ရေခြားမြေခြားရောက်ပြီး ကွကိုယ်ချက်မှ စားရမယ်ဆိုရင်တော့ ငတ်သေမလား မသိဘူး
နောက်ပြီး တောထဲသွားပြီး အငတ်ငတ်အပြတ်ပြတ်နေကျင့်လည်းရှိလာတော့ အစာလည်း မရွေးတော့ပြန်ဘူး
ဆာနေတဲ့အချိန် ဗိုက်ပြည့်ဖို့ အဓိက ဆိုပြီး ဘာလာလာဒေါင်းတော့တာပဲ
အဲ့တုန်းကလည်း အဖွဲ့ထဲ မိန်းကလေး ၄ ယောက်ပဲ ပါတာ ယောက်ျားလေးက ဟန်းကောနဲ့ ထမင်းချက်ကျွေးတာများ ကော့နေတာပဲ သူများတွေလို မနူးမနပ်မစားခဲ့ရဘူး
နောက်ဆုံးရက်မှာ ထောပတ်ထမင်းတောင် စားခဲ့ရတယ်
ကိုယ်က သူတို့ ချက်ပြီး ချောင်းထဲရေဆော့ရင်း ဆေးကြောတာဝန်ယူတာ ဟီး
သူတို့ကလည်း ပြောရှာတယ် ဘုရားရှိခိုးပုတီးစိတ်တဲ့သူတွေ ထင်တယ်တဲ့
ကေမီမွန် ဒံပေါက် ဒီတစ်ခေါက်စားခဲ့တယ်။
အခေါက်တိုင်း လွဲနေတာ ဒီတစ်ခေါက် အဝ စားခဲ့တယ်။
ဟိ။ ဒံ အစိမ်းဖောက်
.ဒန်ပေါက်တွေချက် လက်စွမ်းပြနေလိုက်ကြတာ အနံ့တောင်ရလာတယ်…
.ကျုပ်လည်း ကိုဘလက်လိုပဲ..မင်္ဂလာ ဈေးနားက ကြက်လျှာစွန်း (မူရင်း) ကို အကြိုက်ဆုံးပဲ
ကြက်လျှာစွန်းက ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးပီး မစားဖူးဘူးးး
-သများ ဒီညနေ ဒံပေါက်ဝယ်စားမယ်
ယောက်ခမွကပေါင်းအိုးနဲ့မချက်ဘူး။ မီးသွေးနဲ့ချက်တာ။ အများစာဆိုရင်။ ထည့်တဲ့အချိုးပုံစံကတော့အတူတူပဲ။ ပီးမှအပေါ်မီးများများ အောက်မီးနဲနဲလေးနဲ့နပ်သည်ထိစိတ်ရှည်ရှည်နှပ်တယ်။ နောက်ဆုံးတခုကျန်တာက အကုန်ကျက်ပြီဆိုရင်တူနှစ်လက်ထောပါတ်ကို အရည်ဖျော်ပြီူအပေါ်ကလောင်း အဖုံးအုပ်ထား။ ကျွေးခါနီးထမင်ူအိုးဖွင့်ရင်တအားမွှေးနေလိမ့်မယ်
မချက်​တတ်​ဘူး စားတတ်​တယ်​ သိန်း၁၅၀၀ ​ပေါက်​ရင်​ အဲ့သူ​တွေ အိမ်​​ခေါ်ပြီး တစ်​​ယောက်​တစ်​ရက်​ ချက်​ခိုင်းပြီးစားမယ်​ ။ ခု​တော့ ထီထိုးဖို့ ပိုက်​ဆံ ​ချေးခဲ့ကြဦး
အာ့လူတွေ အကုန်ခေါ်ဖို့ သများကို အရင်ခေါ်မှ ရမယ်။
ထီပေါက်တာ သေချာမှ လာမှာနော်..
နောက်လ.. သတင်းစာထဲထည့်မယ်နော.. ဒါန်ပေါက်တွေကို…။
အခေါ်အဝေါ်တွေက အရေးမကြီး စားကောင်းဖို့ အရေးကြီးတာကို။
သီတင်းစာထဲက ထည့်ဖို့ စဉ်ပေးလိုက်မယ်
ငယ်ငယ်က မကြာခဏစားရတဲ့ သံဈေးမောင်စိန်ဒန်ပေါက်ပဲကြိုက်တယ်။
သမ္မတကြီးဦးနေ၀င်း ဒန်ပေါက်လို့လည်း ခေါ်သပေါ့။
-ဟိုနေ့က SSC နားက ရွှေမြန်ဒံပေါက်ဝယ်စားလာတယ်..
ဒံပေါက် တကယ်မကောင်းရင် ထမင်းကျန်ဟင်းကျန်နဲ့နယ်ထားတာတွေကို စားရသလိုပဲ။
အပေါ်ပိုင်း က စာ တွေဖတ်ပြီး သွားရည် တမြားမြား ဖြစ်နေချိန် မှာ ဒင်း တို့ နှစ်ကောင် မှတ်ချက် နဲ့ တွန့် သွားရော။
. ကောင်းပါလေ့။ lol:-)))))
မြှောက်ပိုင်း အိန္ဒိယစတိုင် ဒန်ပေါက် လေးပါ။ ရန်ကုန်မှာ စားနေကျ ဒန်ပေါက်တွေနဲ့ အရသာ၊ အနံ့မတူပေမယ့် ပိုလို့တောင် စားကောင်းပါတယ်။
မြှောက်ပိုင်း အိန္ဒိယစတိုင် ဒန်ပေါက်က အရသာက နည်းနည်းစပ်ပေမယ့် ဆီလည်း မများတာမို့ ကျန်းမာရေးနဲ့လည်း ပိုညီညွတ်ပြီ လုံးဝ မအီပါဘူး။
ကြက်သားကို ဒိန်ချဉ်နဲ့ နုပ်ထားတာမို့ အသားကလည်း အရမ်းကိုနူးအိပါတယ်။ ချက်တာလည်း ထင်သလို မခက်ပဲ လွယ်လွယ်နဲ့ လုပ်စားနိုင်မှာပါ။
ကြက်သား ဒန်ပေါက်ချက်နည်းလေးကို ခုပဲ ကြည့်လိုက်ရအောင်…
◾ဒန်ပေါက်ဆန် (basmati rice) ♦ နို့ဆီဘူး ၄လုံး (CityMart တွင် ၀ယ်ယူနိုင်သည်)
◾ဇီယာစေ့ ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ
◾သီဟိုစေ့ ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်းစာ
◾Saffron ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၃ဇွန်း
◾ကြက်ပေါင် ♦ ၆ခု (ထက်ပိုင်းပိုင်း ထားပါ)
◾ဂျင်း ♦ လက်တဆစ် (ထောင်းထားပါ)
◾ကြက်သွန်ဖြူ ♦ ၂ခု (ထောင်းထားပါ)
◾ကြက်သွန်နီ ♦ ၃လုံး (ပါးပါးလှီးပါ ကြော်ထားပါ)
◾ဒိန်ချဉ် (yoghurt) ♦ ၁ခွက်စာ
◾ဆီ (oil) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၅ဇွန်းစာ
◾လေညှင်း (cloves) ♦ ၂ခု
◾ဖာလာစေ့ (cardamon) ♦ ၄ခု
◾ဇာပွင့် (Javetri) ♦ ၃ခု
◾ကလာဝေရွက် (bayleaf) ♦ ၂ခု
◾သစ်ဂျပိုး ♦ ၁ခု
◾ဇီယာ (cumin) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
◾ဇီယာမှုန့် (cumin pdr) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
◾နံနံစေ့မှုန့် (coriander pdr) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
◾ငရုတ်သီးမှုန့် (chilli pdr) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
◾ဆနွင်းမှုန့် (tumeric pdr) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
◾ငရုတ်ကောင်းလုံး (အမဲ) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်းတ၀က် (မညက်တညက် ထောင်းထားပါ) (black pepper corn)
◾ငရုတ်သီးစိမ်း (green chilli) ♦ ၆ခု (စိတ်ပေးပါ)
◾ဆား (salt) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်းခွဲ
◾မာဆလာ (masala) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၁ဇွန်း
◾ပူစီနံ (mint) ♦ ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
◾နံနံပင် (coriander) ♦ ၁စည်း (ပါးပါးလှီးပါ)
Excellent- Foods Corner
မမီးတို့ စိတ်ကြိုက် မဆလာနံ့ သိတ်မများဘဲ..ထောပတ် အနည်းငယ်နဲ့ ချက်ထားတဲ့ အလွယ် ချက်လေးပါ..။ စားလို့ အရမ်းကောင်းပါတယ်..။
မမီး အရောင် အတွက် ကုကမံကို မသုံးဘဲ အလွယ်တကူ ရနိုင်တဲ့ အစာ ဆိုးဆေးတွေကို သုံးထားပါတယ်.. US မှာ နေသူတွေကတော့ ကိတ်မုန့် ပစ္စည်းတွေ ရောင်းတဲ့ အတန်းမှာ အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်..မြန်မာ မှာ နေသူများကတော့ သိမ်ကြီးဈေးနဲ့ ကိတ်မုန့် ပစ္စည်းတွေ..ပရဆေး ဆိုင်တွေမှာ ၇နိုင်မယ် လို့ ထင်ပါတယ်..။
2. ထမင်းကျက်တဲ့ အခါ တ၀က် ကို ဖွဖွလေး ထမင်းမကြေအောင် ခပ်ထုတ်ပီး ကြက်သွန်နီကြော် ဖြန့်ထည့်ပါ၊ ချက်ထားတဲ့ ကြက်သားနဲ့ အနှစ်များထည့်ပါ၊ အပေါ်မှ ဖယ်ထားတဲ့ ထမင်းပြန်အုပ်ပီး ၊ ရေ ၁ စားပွဲတင်ဇွန်း နဲ့ အသင့်စပ်ထားတဲ့ လိမ္မော်ရောင် ကို နေရာကျဲကျဲ ဖြန့်ထည့်ပါတယ်၊ အဖုံးပိတ်ပီး စားခါနီး အထိနှပ်ထားပါတယ်၊
3. ထမင်းခပ်တဲ့အခါ အရောင် သမသွားအောင် အနည်းငယ် ဖွပေးလိုက်ပီး၊ အိမ်ချက် ဒန်ပေါက်လေး သုံးဆောင်နိုင်ပါပီရှင်။
Credit to Meemeetofu.com
အမှန်တော့ ဒန်ပေါက် သိပ်မကြိုက်တဲ့အတွက် ချက်နည်းတွေလည်း သိပ်ပြီး မှတ်ထားလေ့ မရှိပါဘူး။ ရံဖန်ရံခါမှ ဒန်ပေါက်က စားဖြစ်ပါတယ်။ ခုလို နည်းတွေ စုထားတော့လည်း သိမ်းသွားလိုက်ပါတယ်။